‘नेपाली खेलकुदमा महिलाको स्थान नै माथि,’ मुख्य प्रशिक्षक गुरुङ « KhelkudNews.com
‘नेपाली खेलकुदमा महिलाको स्थान नै माथि,’ मुख्य प्रशिक्षक गुरुङ
Published On : 30 March, 2021 2:08 pm
सुस्मीता गुरुङ, नेपाल मार्सल आर्ट्स हाप्किडो एसोसिएसनकी मुख्य प्रशिक्षक तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रि । मेहनती र सरल स्वभावकी सुस्मिता आफ्नो खेलको प्राविधिक विषयमा पूर्ण रूपमा पकड राख्न सक्ने एकाध महिला खेल व्यक्तित्व मध्यकी एक हुन् । तीनै सुस्मितासंग खेलकुद न्युज डटकमले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप
हाप्किडोमा तपाइको आकर्षणको कारण के हो ?
पहिलो कुरा त मार्सल आर्ट खेल हो या या आर्ट हो भन्ने बहस संसारमा नै चलेको छ । यो बहसमा म जान चाहन्न । खेलको रूपमा यसको आफ्नो महत्त्व र विशेषताहरू होलान् । तर, मान्छे जिउनका लागि सुरक्षित भएको महसुस हुनु पर्छ । मान्छेका सम्बन्ध सुमधुर रहनु पर्छ । प्रेममय हुनु पर्छ र सुरक्षित रहनु पर्छ भन्ने हो । यसका लागि हतियार बिना नै मानिस सुरक्षित रहनै पर्छ । यही सोचका साथ म मार्सल आर्टमा आबद्ध रहेको हुँ । हाप्किडो सही मार्सल आर्ट विधा हो । यसले मलाई सुरक्षित बनाएको छ । आत्मबल पनि दिएको छ । यसको मतलब मैले अन्य मार्सल आर्टलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन । हरेक मार्सल आर्टका आफ्ना कला छन् । विज्ञान छन् । मलाई भने हाप्किडो उपयुक्त लाग्यो । म सबैलाई के भन्नु चाहन्छु भने हरेक व्यक्तिले मार्सल आर्ट सिक्नै पर्छ । यसमा हाप्किडो सिक्नु भयो भने धेरै राम्रो ।
अनि महिला मान्छे मार्सल आर्टमा लाग्दा कठिन भएन ?
भएन । साँचो भन्नु पर्दा म यस्तो भाग्यमानी महिला हुँ की जसलाई म सानो छँदा मेरा बा आमा र सबै परिवारले सहयोग गर्नु भयो । विवाह पश्चात् श्रीमान्बाट पनि सहयोग पाए । यहीँ सहयोगका कारण म मार्सल आर्टमा छु । पछिल्लो सामाजिक र राजनीतिक घटनाक्रमले के पुष्टि गरेको छ भने हरेक आमा बाबुले आफ्ना छोरीलाई औपचारिक शिक्षा सहित मार्सल आर्ट पनि सिकाउन जरुरी छ ।
सिक्नु पर्छ त भन्नु भयो । सिकाउनका लागि थप योजना पनि होलान् नि ?
हप्किडोले समय समयमा देश भरी सेल्फ डिफेन्स कार्यक्रम चलाएको छ । यसै सेल्फ डिफेन्स हामी निरन्तर चलाउन चाहन्छौ ।
यसको मतलब नेपाल मार्सल आर्ट हाप्किडो सबै महिलालाई सुरक्षित गराउन सक्षम छ ?
सक्षम छ । हामीले त अझ के भन्न चाहन्छौ भने तपाइका चेली हामी कहाँ पठाउनुस् । हामी पूर्ण सुरक्षा दिन्छौ । हाम्रो सेमिनार र प्रशिक्षणमा निरन्तरता दिनु भयो भने तपाइहरू सुरक्षित जीवन बिताउनु सक्नु हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौ ।
यो त भयो मार्सल आर्ट र आत्म सुरक्षाको कुरा । खेलकुदकै रूपमा नेपालमा हाप्किडोको स्थान कहाँ छ ?
नेपालमा हाप्किडोको इतिहास लामो छैन । तर, यस छोटो समयमा हामीले जत्ति लामो यात्रा तय गरेका छौ । यसले हामी अब चाँडै नै माथिल्लो उचाइ पाउनेमा विश्वस्त रहेका छौ । छोटो समयमा नै हामी नेपालका धेरै खेलाडी भएको खेलको रूपमा यसलाई स्थापित गरेका छौ । हामीले केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता पनि पाएका छौ ।
नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारको आयोजना गरेका छौ । हामी विश्व च्याम्पियनसिपको तयारीमा छौ । हाम्रो यो गति नेपाली खेलकुदमा सबैले हेर्न र जान्नु पर्ने विषय हो । हाम्रो गति नेपाली खेलकुदमा सवैका लागि अनुकरणीय विषय हो ।
यसका कारण के हो ? के यस्ता क्षमता तपाईँहरूसँग छकी यत्ति छोटो समयमा यत्ति लामो यात्रा तय गर्नु भयो ?
पहिलो त हाम्रो नेतृत्वका कारण हो । हाम्रा अध्यक्ष काली बहादुर घर्ती मगरको लगातारको सक्रियता, मेहनत र दुर्दृष्टिका कारण यो सम्भव भएको हो । अरू टिम पनि सक्रिय भएको कारण हामीलाई सहज भएको छ ।
तपाँइहरुका थप उद्देश्य के हुन् ?
हामी नेपाली खेलकुदमा पृथक् पहिचान बनाउन लागेको छौ । हामीले राज्यको पैसा असुल्ने र फाइदा लिने नियत राखेनौ । हामीले राज्यको आर्थिक उत्थानलाई लक्ष्य बनायौ । यस कारण विश्व च्याम्पियनसिपको तयारीमा लागेका छौ । यस विश्व च्याम्पियनसिपले नेपालको साख बढाउने तथा नेपालको पर्यटकीय विकासमा एउटा फड्को मार्ने विश्वास गरेका छौ ।
हामीले नेपाली समाजमा समानताका मुद्दालाई उठाएका छौ । रोल्पाको एउटा गाउँमा हामीले राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपको आयोजना गरेर आएका हौ । चौथो संस्करण काठमाडौँमा आयोजना हुँदै छ । यसको मतलब के हो भने हाम्रो लागि रोल्पा र काठमाडौँ बराबरी हो ।
हाम्रो नेतृत्व प्युठानका अध्यक्ष हुनु हुन्छ । महासचिव रोल्पाका हुनु हुन्छ । म मुख्य प्रशिक्षक चितवन सहरको हुँ । यसको मतलब के हो भने हाप्किडो नै यस्तो खेल हो कि जहाँ हरेक भूगोलको उत्तिकै समानता छ ।
महिला मुख्य प्रशिक्षक भएको खेल हाप्किडो हो । महिलाकै नेतृत्वमा महिलाकै संयोजकत्वमा राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप सम्पन्न गरेका छौ ।
मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हाप्किडोले भागबन्डामा होइन क्षमता विकास गराउँदै सबैलाई अवसर दिन सक्छ । जिम्मेवारी दिन सक्छ । यसमा विभेद हुँदैन । विभेद रहित समाज निर्माण खेलकुदको मुद्दा हो । यो मुद्दामा पनि हाम्रो सङ्घ प्रतिबद्ध छ ।
हाप्किडो खेल्ने कुनै खेलाडीको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने हामी सहरका ठुला विद्यालय त भन्न सक्दैनौ । तर, कुनै न कुनै ढङ्गले हामीले शिक्षित गराउन सक्छौ ।
मैले भन्न खोजेको के हो भने खेलकुदलाई पर्यटन, आर्थिक विकास, शिक्षा र विभेद रहित समाज निर्माणको अभियानमा सरिक बनाउन पर्छ । यसका लागि हामीले अभियान नै चालेका छौ ।
प्राविधिक कुरा गरौँ । नेपाल हाप्किडोको अबको बाटो के हो ?
मैले अघि पनि भने नि विश्व च्याम्पियनसिप आयोजना हाम्रो लक्ष्य हो । कुनै दिन दक्षिण एसियाली खेलकुद र एसियाली खेलकुदमा हाप्किडो समावेश हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यस अवस्थामा हामीले उत्कृष्ट नतिजा पाउन पर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध छौ । यसका लागि हामीले अहोरात्र मेहनत गरिरहेका छौ । मलाई विश्वास छ , यो मेहनतले छोटो समयमा नै हामीलाई नेपालको प्रमुख खेलको रूपमा स्थापित गराउने छ ।
नेपाली खेलकुदमा महिलाहरूको स्थान कस्तो छ ?
प्रदर्शनको हिसाबले नेपालीको प्रदर्शन सधैँ स्तरीय रह्यो । पछिल्लो समय म लगायत केही महिला मुख्य प्रशिक्षक छौ । अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रि छौ । सङ्घको नेतृत्व गर्ने पनि हुनु हुन्छ । यस कारण नेपाली खेलकुदको सबै क्षेत्रमा महिलाको स्थान प्रभावकारी भइरहेको छ ।